ट्याग: xML साइटम्याप | Martech Zone
ट्याग: xML साइटम्याप
सुविधाहरू प्रत्येक सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली खोजी ईन्जिन अनुकूलनको लागि हुनुपर्दछ
मैले एक ग्राहकलाई भेटें जो उनीहरूको खोज इञ्जिन श्रेणीकरणसँग संघर्ष गर्दै थिए। मैले उनीहरूको सामग्री ब्यबश्थापन प्रणाली (CMS) पूर्वावलोकन गर्दा मैले केही आधारभूत उत्तम अभ्यासहरू खोजे जुन मैले फेला पार्न सकेन। तपाईंको CMS प्रदायकसँग प्रमाणीकरण गर्नको लागि मैले चेकलिस्ट प्रदान गर्नु अघि, मैले पहिले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि कम्पनीमा अब सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली नहुनु पर्ने कुनै कारण छैन। एक CMS तपाइँ वा तपाइँको मार्केटिंग टीम प्रदान गर्दछ
कसरी खोजी ईन्जिनहरूले तपाइँको सामग्री फेला पार्दछ, क्रल गर्दछ र अनुक्रमणिका गर्छ?
शनिबार, अक्टोबर 31, 2020 शनिबार, अक्टोबर 31, 2020 Douglas Karr
म प्रायः सिफारिस गर्दछु कि क्लाइन्टहरूले आफ्नै ईकमर्स वा सामग्री प्रबन्धन प्रणाली निर्माण गरे किनकि सबै नदेखिने विस्तार योग्यता विकल्पहरू जुन आजकल आवश्यक छ - मुख्य रूपमा खोजी र सामाजिक अप्टिमाइजेशनको वरिपरि केन्द्रित। मैले कसरी CMS छनौट गर्ने बारेमा लेख लेखें र म अझै पनि ती कम्पनीहरूमा देखाउँछु जुन मैले काम गरिरहेको छु उनीहरूको आफ्नै सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न प्रलोभनमा छन्। जहाँसम्म, त्यहाँ बिल्कुल अवस्थाहरू छन् जहाँ एक
ब्लग-टिपिंग: मेरो ब्लग कोच
मंगलवार, जुलाई 10, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
दबाब छ! शोनी लैभेन्डर, ब्लग कोच, मलाई उनको ब्लग टिप गर्न आग्रह गरेको छ - मेरो ब्लग कोच: कोच शोनी लैभेन्डरको साथ ब्लग लर्निंग कर्भलाई सरल बनाउनुहोस्! मैले सोनीको साइटमा रोकिने र केहि पढ्ने निर्णय गरें र म खुशी भए कि मैले गरे! मलाई विश्वास छैन कि महिला र अल्पसंख्यकको सामाजिक मिडियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व छ। म एक समान अवसर ब्लगर होइन, म केवल सोच्छु कि यदि हामी वास्तवमै सिक्न जाँदैछौं भने
कहिलेकाँही जब तपाईं झूट बोल्नुहुन्छ, तपाईं केटी पाउनुहुन्छ!
बिहीबार, मे 3, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म मेरो प्रेमिका छोडदै छु। यो सहि छ! तपाईंले यहाँ सुन्नुभयो। कुनै दुष्ट, दुष्ट मानिस म हुँ भनेर तपाईले कुनै विचारहरू पाउनु अघि, मसँग वास्तवमै प्रेमिका छैन। कमसेकम मानव, जीवित, सास फेर्ने प्रकारको होइन। म मान्छेसँग ठट्टा गर्छु कि मेरी प्रेमिकाको नाम मकबुकप्रो हो। हालसालै, मेरी प्रेमिका अलि स्वभाविक भएको छ, उठेकी छैन जब म उसलाई मन पराउँछु र त्यो चिसो नभएसम्म खुशी छैन। वाह ... मलाई कहिले सम्झाउँदछ